Ogaden News Agency (ONA) – Is-bahaysi u dhigma midka ka jira USA ma u hirgali karaa shucuubta Geeska Afrika
Is-bahaysi u dhigma midka ka jira USA ma u hirgali karaa shucuubta Geeska Afrika
Waxaan arkaynaa qaaradaha caalamka oo isugu imanaya isbahaysiyo iyo xidhiidho iskaashi oo qaarkood gaadha heer Federaal sida Midowga Yurub ama Kon-Fideraal sida Is-bahaysiga dawladaha Khaliijka carabta. Waxaa la sheegayaa in casrigan ay adagtaahay dawladna inay kali ahaanteeda u noolaato oy ka qaybgasho tartanka dhaqan-dhaqaale iyadoo dawladaha yaryar een ku dhex jirin Isbahaysi balaadhan sida midka Midowga Yurub ay adkaan doonto inay noolaadaan sida uu kaluunka badda midba midkuu ka weynyahay u cunana loo cuni doono. Sababta ugu badan ee arintaasi keeni doontana waa horumarka uu bani-aadamka ka gaadhay xagga Tiknoolojiyada Wax-soo-saarka iyo Isgaadhsiinta. Hasa ahaatee, waxaa wax walba ka horeeya inuu qofka banii-aadamka ah dareemo kuna kalsoonaado inuu xoryhay oo isaga shaqsi ahaantiisa iyo umad ahaantiisa uu ku doortay isu-tagga iyo wax wadaaga. Haddii uusan qofkaasi ku niyad samayn ama umadaasi aanay ku niyad samayn inay xor u tahay aaya-heeda iyo madax banaanideeda, lagama yaabana inay u aragto isu-tagga iyo is-bahaysiga inay danteeda ku jirto, sababtoo ah Xoriyadda waa shayga ugu qaalisan ee Ilaahay uu siiyo qofka aadanaha ah markuu dunida u soo boxo.
Waxaan aragnay qarnigii tagay dawlado Federaal ahaa oo xoog badnaa oo si sahlan u kala dhaqaaqay, ama uu dhiig badan ku daatay, iyo qaar weli doonaya inay kala tagaan oo shucuubta qaarkood ay doonayaan inay goonidooda isu taagaan sida Catalonia ama Quebec Canada. Sababta ugu badan ee arintaa keenta waa iyadoo qawmiyadaha qaarkood ee ka midka ah Is-bahaysigaasiga (Federal) ay dareensan yihiin in aanay rabitaankooda ku iman isu-tagaa oo xoog lagu soo maquuniyay. Taariikhda in marka hore xal loo helo waxay asaas u tahay in Joqraafiga (Is-bahaysiga Federaalka ah) uu xasilo. Haddii kale waxuu la mid ahaanayaa Is-bahaysigaasi burkaan hoosta ka shidan oo sugaya meel yaroo uu ka neefsado.
Shucuubta Geeska Afrika waxyaaba badan ayay wadaagaan oy kaga soocan yihiin shucuubta kalee Afrika. Waxayna heystaan dhamaan sababihii u sahli lahaa inay unkaan Is-bahysi xoog badan oo ka qaybgali kara tartanka caalamka. Waa hadii la saxo taariikhda oo dhamaan shucuubta iyo qawmiyadaha dagan rugtan joqoraafiga ah ee Geeska Afrika ay wada dareemaan inay xor yihiin oy ka talin karaan masiirkooda. Ma suurta-galayso in qawmiyad ama 2ba ay si jujuub ah ku unkaan Is-bahaysi (Federaal), kuna qasbaan inta kale inay ka mid yihiin. Hadday dhacdana lagama yaabo inuu ahaado Is-bahaysigaasi mid waara oo luga adag ku taagnaada. Federaalkii Soofyeetka (USSR) dawladna kama xoog badnayn qarnigii tagay, wuxuu u burburay un qawmiyadihii la’isugu keenay oo intooda badan aaminsanaa inay ku jiraan gumaysigii Boqortooyadii Tsar ee ka horeysay shuuciyadii dhalatay 1917.
Shacbiga S.Ogadenya wuxuu diyaar u yahay inuu ka xoroobo gumaysigii boqortooyadii Abyssinia oo wali dulsaaran. Ka dibna uu isagoo xor ah la noolaado shucuubta iyo qawmiyadaha Geeska Afrika oy kawada tashadaan masiirka gobolka Geeska Afrika oy isla hirgaliyaan Iskaashi dhab ah oo ku dhisan Xoriyad, Sinaan, Cadaalada iyo horumar suu u noqdo gobolka mid leh awood dhab ah oo aan dawladaha caalamka ka dawarsan quutkooda.
Wuxuu shacabka S.Ogadenya markuu helo xoriyadiisa, diyaar u yahay iskaashi, darsinimo wadaag iyo Is-bahaysi u dhigma midka ka jira USA inuu kula bahoobo dhamaan qawmiyadaha daga Geeska Afrika oo dhamaantood aaminsan inay xor u yihiin rabitaankoodaa.